RASMI: Olivier Giroud oo heshiis cusub u saxiixay kooxdiisa Chelsea – Gool FM
(London) 21 Maajo 2019. Weeraryahanka Chelsea ee Olivier Giroud ayaa heshiis cusub oo hal sano qalinka ugu duugay kooxdiisa.
32-sano jirkaan reer France ayaa kordhiyey heshiiskiisa uu ku sii joogayo garoonka Stamford Bridge illaa dhammaadka xilli ciyaareedka 2019-20.
Giroud qandaraaskiisa waxa uu ku ekaa xagaagan, taasoo la micno ahayd inuu beeca xorta ah ugu biiri karay kooxdii uu doono, laakiin sheekadaas Chelsea ayaa ka soo horjeesatay oo ka saxiixatay sanad kale oo heshiis ah.
“Anigu aad baan ugu faraxsanahay inaan heshiiskan cusub saxiixo, runtii waan doonayay inaan sii joogo halkaan sanad kale” ayuu yiri Giroud.
Weeraryahankan qibradda leh ayaa Chelsea kaga soo biiray kooxda ay Magaalada London ku xafiiltamaan ee Arsenal bishii Janaayo ee 2018-kii, waxaana tan iyo markaas uu dhaliyey 17 gool 62 kulan oo uu ka soo muuqday tartammada oo dhan.
Waxa uu ka mid noqday xiddigaha ay ku tashato Blues, isagoo ka qeyb qaatay inuu geeyo Chelsea final-ka Europa League, isagoo u dhaliyey 10 gool 13 kulan oo uu u ciyaaray, waxaana uu sidaas oo kale sameeyey saddex caawin.
Giroud ayaa sidoo kale ka caawiyey kooxda ka dhisan Galbeedka Magaalada London ee Chelsea ku guuleysiga tartanka FA Cup-ka xilli ciyaareedkii hore.